Golis oo soo kordhisay adeeg cusub sidoo kalena qiima dhimis ku sameysay qaar ka mid ah adeegyada ay bixiso (Sawiro+Codad) | Gaaloos.com
Home » galmada » Golis oo soo kordhisay adeeg cusub sidoo kalena qiima dhimis ku sameysay qaar ka mid ah adeegyada ay bixiso (Sawiro+Codad)
Golis oo soo kordhisay adeeg cusub sidoo kalena qiima dhimis ku sameysay qaar ka mid ah adeegyada ay bixiso (Sawiro+Codad)
Waxaa shirkadda isgaarsiinta Golis ay soo kordhisay adeeg cusub sidoo kalena qiima dhimis ku sameysay qaar ka mid ah adeegyada ay bixiso shirkadda.
Adeega ay soo kordisay shirkadda ayaa loogu magac daray XALIYE, waana adeeg casri ah oo macaamiisha shirkadda u fududeenaya in ay si fudud u adeegsadaan adeegyada kale ee shirkadda
Sidoo kale shirkadda ayaa qiima dhimis iyo casriyeen ku sameysay adeega dhinaca internetka ah, kadib munaasabadda kooba oo dhacday xarunta weyn ee shirkadda kuu leedahaya magaalada Bosaso.
Waxaa munaasabadda ka soo qeyb gal;ay adeega cusub iyo qiima dhismiska u soo bandhigay macaamiisha shirkadda agaasimaha waaxda suuqgeynta Cabdiraxaman Cabdullaahi Jaamac Dayax, agaasimaha waaxda IT-ga Aadan Siciid Saalax, ku xigeenka waaxda suuqgeynta Jaamac Xassan Barre iyo hogaanka ganacsiga Cumar Ciise Maxamad Faaruuq.
Waxaa ugu horeyn xafladda ka hadlay oo sharaaxaad ka bixiyey adega ay soo kordhisay shirkadda Madaxa suuqgeynta shirkadda Golis Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaamac Dayax waxa uuna sheegay in shirkadda Isgaarsiinta ee Golis ay aasriyeysay adeegga Internetka ee loo yaqaan GPRS-E.
Waxa uu intaasi ku daray Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaamac in shirkaddu ay sidoo kale qiimo dhimis boqolkiiba todobaatan (70%) ay ku sameysay adeegyada Internetka ee moobilka laga isticmaalo.
‘’Waxaa sababay in qiimaha in la dhimo waa tixgalin aan siinay Macaamiishayada iyo dalabka iyo baahida ka yimi Macaamiisha,waxaa sido kale la diyaariyay Xirmooyin Internet ah oo ku salaysan Waqti iyo Mug oo Macmiilku uu ku gadanayo hadba inta awoodiisu tahay,isaga oo lacag ku shubanaya Moobilkiisa ka dibna helaya Internet awood leh’’ayuu yiri Mudne Cabdiraxmaan .
Mudane Dayax oo hadalkisa sii wata ayaa sheegay in Shirkaddu ay diyaarisay qalab casri ah oo macmiilku uu Kumbiyuutarkiisa uu ka isticmaalayo Internetka isaga oo Wireless ahaan u isticmaalaya ama uu ka istacmaalayo flash meel kasta oo uu joogo’’.
Madaxa Suuqgeynta Shirkadda Golis Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaamac ‘’Dayax’’,ayaa sheegay in Macmiilku meel kasta oo uu joogo uu isticmaali karo dhamaan Adeega Internetka sida uu isticmaalo Adeegyada kale ee shirkaddu ay bixiso.
Adeega Internet Moobilka iyo sida loo isticmaalo.
Agaasimaha Waaxda IT-ga Aadan Siciid Saalax ayaa faahfaahin ka bixiyay Adeegga Internet Moobilka iyo sida loo isticmaalo,kaasi oo ay ka dhexmuuqdaan fursado muhiim u ah bulshada ku xiran Shirkadda.
Adeegan ayaa shirkaddu ay u kala saartay Todobaadle,maalinle iyo Bile,waxaana shaxda hoose aad ka dheehan kartaa Xajmiga Netka iyo Qiimihiisa.
Si aad u hesho Xirmooyinkan fadlan raac.
Maalinle Garaad marka hore *440#
50 MB =$1
Asbuucle Garaac marka hore *450#
Bile Garaad Marka hore *460#
Ku xigeenka Waaxda Suuqgeynta Mudane Jaamac Xassan Barre oo dadweynaha la wadaagay Adeegga cusub ee Xaliye ayaa sheegay in Adeegan uu Macmiilka u fududaynayo inuu si fudud u isticmaalo dhamaan Adeegyada shirkadda Golis.
‘’Adeegga xaliye wuxuu u fududaynayaa in Macaamiish inay si fudud u adeegsadaan Adeegyada dhamaan ay Shirkadduy bixiso,isla markaana baahiyaha ay uga baahdaan shirkadda ay iyagu xalistaan iyaga oo jooga goobahooda’’Ayuu yiri Jaamac Xassan Barre.
Wuxuu intaas ku daray‘’…Waxaad marka aad isticmaalayso Adeegan aad galaysaa *818#,ka dibna waxaad galinaysaa 1 2 3 4,waxaad samaysanaysaa lambar Sir ah’’.
Ku xigeenka Waaxda Suuqgeynta Mudane Jaamac Xassan Barre ayaa sheegay in Adeeggan ay Macmiishu ku bixin karaan Korontada ay shirkaddu bixiso,ay ku ogaan karaan Qiimaha lagaaga leeyahay Internetka iyo dhammaan adeegyada kale ee shirkaddu ay bixiso.
Wuxuu intaas ku daray inaad adeegan aad u isticmaali karto inaad isaga saarto PIN-PUG haddii uu Kaarka kaa galo,wuxuu sheegay in adeegan uu kuu fududaynayo inaad dalbato Adeegga Internetka.
Madaxa ganacsiga shirkadda Golis Mudane Cumar Ciise Maxamed ‘’Faaruuq’’ oo soo xiray shir warbaahinta ayaa sheegay in Golis ay u tooghayso baahida Macaamiisheeda.
Annaga iyo macaamiishu isku si baan u fakarnaa annaga EEBE la kaashanayna,waxaan u xaqiijinaa filashadooda,marka filashadooda aan la daahno waa xilli aan go’aansanay in waxa ay naga rajaynayaan wax ka wayn inaan u keeno’’ayuu yiri Cumar Faaruuq.
Si kastaba ha ahaatee hogaanka ganacsiga shirkadda Golis ayaa sheegay inay ka go’an tahay inay mar kasta ka jawaabaan baahida macaamiishooda.
Title: Golis oo soo kordhisay adeeg cusub sidoo kalena qiima dhimis ku sameysay qaar ka mid ah adeegyada ay bixiso (Sawiro+Codad)